China Steel Highway akwa akwa na nwụnye ụlọ ọrụ na-emepụta | Honghua
Ngwunye akwa akwa akwa akwa na ntinye
Ndị isi na-eme na fabricgha ọrụ bụ:
Nga mgbakọ butt ịgbado ọkụ
Cha na profaịlụ
Mgbapu ala na nkwadebe onu
Dabara adaba nke stiffeners
Ọnwụnwa erection (anaghị adịkarị eme)
Mee atụmatụ curvature ke girders nwere ike mfe nnabata site steelwork ngo. Nakwa dị ka aesthetically ọzọ ụtọ karịa iji girders nke curved site a usoro nke ogologo ngalaba, girders nke curved na plan ga mfe na-ewu nke oche cantilevers tinyere ogologo nke ihe owuwu.
Dị ka curvature na ugwu, atụmatụ curvature ekwesịrị ịkọwapụta site n'aka onye mmebe site na iji kọwaa nke ọma nke curvature, ma ọ bụ usoro nhazi.
Na omume, a na - etolite flange nke na - eme njem na ụgbọelu ya, na - eji ngwa ọgụgụ na - achịkwa ọnụ ọgụgụ, dị ka usoro nke chords, nke na - adịkarịghị karịa 500 mm maka radii ruo 125 m, ma ọ bụ karịa 1000 mm maka radii karịrị 125 m Ọ naghị adịkarị maka onye mmebe igosipụta nke a.
Nke gara aga: Footgha ígwè nke e ji ígwè mee na ntinye
Osote: Steel Ọdịdị ogbako echichi
Nrụgharị Steel Bridge
Steel Truss Bridge Maka ire ere
Structural Steel ricgha N'ihi Bridge